Sagaal qof oo kale oo dalka Kenya laga helay caabuqa Coronavirus | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Sagaal qof oo kale oo dalka Kenya laga helay caabuqa Coronavirus
Sagaal qof oo kale oo dalka Kenya laga helay caabuqa Coronavirus
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in sagaal qof oo hor leh laga helay caabuqa dilaaga ah ee COVID-19, iyadoo caabuqaasina uu ku sii fidayo dalkaasi.
Wasiirka Caafimaadka Kenya, Mutahi Kagwe ayaa Talaadadii xaqiijiyay in la diiwaangeliyay sagaal kiis oo fayriska Corona ah, ka dib markii laga helay toddobo qof oo dalkaasi u dhalatay iyo laba kale oo ajnabi ah.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in 82 muunadood oo la baaray laga helay sagaal qof caabuqa Coronavirus, waxayna ka dhigeysaa tirada guud ee dalkaasi laga diiwaangeliyay shan iyo labaatan ruux.
“82 muunadood oo la baaray waxaa la xaqiijiyay in 9 qof laga helay cudursidaha Corona, tani waxay tirada guud ee la xaqiijiyay dalka Kenya ka dhigeysaa 25 qof.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri “Xaaladahan la xaqiijiyay waxa ay ku kala baahsan yihiin afar county oo kala ah Nairobi, Mombasa, Kilifi iyo Kwale. Sagaalka kiis ee hadda la xaqiijiyay 7 waxay u dhasheen Kenya, labada kalena waa ajnabi.”
Kiisaskan cusub ayaa waxay ku soo aadayan, xilli Dowladda Kenya ay aad u xadiday dhaqdhaqaaqii guud ee dadka dalkeeda ku nool.
Magaalada Nairobi ayaa waxaa ka dhaqangalay awaamiir culus, oo dhawaan ay dowladda dalkaasi ku soo rogtay, waxaana xiran goobihii ay dadku isugu imaan jireen, sida maqaaxiyadaha, Masaajida iyo Kaniisadaha, inkastoo ay furan yihiin maqaaxiyadaha, dadkana loo ogolyahay oo qura inay cunada ka soo iibsadaan, isla-markaana ay guryahooda u qaataan.